Saddex-xagalka Amsterdam: Riyo Mise Riwaayad? • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Dambi Saddex-xagalka Amsterdam: riyo mise riwaayad?
maqaal by daroogada 18 May 2021
2 Dagaalkii Polder
Jimcihii la soo dhaafay ayuu duqa magaalada Amsterdam soo bandhigay qorshe si loola dagaallamo dambiyada daroogada ee Amsterdam. Loogu talagalay saddex-xagalka Amsterdam (duqa magaalada, booliiska iyo Adeegga Xeer-ilaalinta Guud) wax walba waxay ka bilaabmaan ka hortag iyo hirgelinta horumar waara oo waara muddada dheer, iyadoo loo daneynayo dhammaan muwaadiniinta Amsterdam. Cadaadisku waa qeybta ugu dambeysa ee lama huraanka ah ee lama huraanka ah ee ladagaalanka xad dhaafka, ayay tiri Duqa Magaalada Halsema.
Qorshaha “Saddex-xagal ka dhan ah dambiyada daroogadaShan gool ayaa la sameeyay:
Kordhinta wacyiga 'isticmaaleyaasha madadaalada' ee saameynta musuqmaasuq ee ka ganacsiga daroogada.
Triangle-ka Amsterdam wuxuu ujeedkiisu yahay inuu bilaabo dood bulsho oo ku saabsan saameynta bulshada ee isticmaalka daroogada mustaqbalka dhow iyo in la ogeysiiyo dadka isticmaala dhibaatada bulshada iyadoo loo marayo macluumaadka.
Xoojinta kala qeybsanaanta u dhexeysa suuqa dawooyinka jilicsan iyo kuwa adag
Adoo yareynaya cabirka suuqa xashiishka Amsterdam isla markaana ka dhigaya mid la maamuli karo, isla markaana isla mar ahaantaana nidaaminaya albaabka dambe, saddex-xagalku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu xoojiyo kala-soocida u dhexeeya suuqa dawooyinka jilicsan iyo kuwa adag.
U fidinta aragti (dadka nugul) dhalinyarada
Saddex-xagalku wuxuu bilaabaa kana qayb qaataa barnaamijyo loogu talagalay xoojinta fursadaha, booska bulshada iyo aragtida dhalinyarada nugul.
La dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaran dumiska
Iyada oo la adeegsanayo tallaabooyin maamul, kahortag iyo cadaadis, saddexagalka ujeeddadiisu tahay kahortagga iyo kahortagga musuqmaasuqa iyo wiiqidda ka ganacsiga daroogada sida ugu macquulsan.
Kahortaga rabshadaha xad dhaafka ah
Saddexagalka ayaa looga golleeyahay in lagu gaaro hoos u dhac weyn rabshadaha xad-dhaafka ah iyada oo loo marayo isku-darka tallaabooyin maamul, ka-hortag iyo cadaadis.
Marka la soo koobo, danta guud ee muwaadiniinta Amsterdam, waxaa dhowaan jiri doona olole wacyigelin ah oo loogu talagalay "yogasnuivers", 100 ka mid ah 166 dukaanno kafee ah la xiray iyo dawlada hoose waxay rabtaa inay ladagaalanto musuqmaasuqa, wiiqida iyo rabshadaha oo ay kujiraan talaabooyin maamul, kahortag iyo caburin ah.
Arrinta ugu muhiimsan ee saddex-xagalka Amsterdam waa la ilaaway markii la dejinayay qorshayaashan. Sida muuqata cidina uma sheegin duqa magaalada iyo dagaalyahanada kale ee dambiyada in suuqa maandooriyaha ugu horeyn dalab lagu wado, halkii laga keeni lahaa sahay. Ilaa iyo inta dalabka daroogadu sii soconayo, soo jeedimahan oo dhami waxay ku socdaan in ay fashilmaan waxayna kaliya u horseedi doonaan murugo badan, buuq badan iyo rabshado badan. Mid ka mid ah waxyaabaha soo shaac baxay sanadihii la soo dhaafay ayaa ah in "dagaalka ka dhanka ah daroogada" uu horseeday isticmaalka daroogada oo badan iyo dambiyada daroogada oo badan, halkii laga yareyn lahaa.
Olole loogu talagalay "yogasnuivers" fursad uma lahan ilaa iyo inta aan loo helin beddel macquul ah kooxdan (tirada badan) ee adeegsadayaasha ah. In la xiro dukaamada kafeega loona diido dadka ajaanibta ah in ay soo galaan meheradaha qaxwaha ayaa inta badan horseedaya ganacsiga waddooyinka oo badan, dhib badan iyo rabshado badan. Iyo onderzoek dhawaan Michelle Bruin oo ka tirsan jaamacadda Groningen ayaa muujisay in dawladdu si isa soo taraysa u isticmaaleyso fursadaha uu bixiyo sharciga maamulka, maxaa yeelay sharciga ciqaabtu wuxuu si aad ah u xakameynayaa dowladda awooddeeda ah inay ka hortagto daroogada (dembiga). Tani waxay gelineysaa ilaalinta sharciga ah ee muwaadiniinta cadaadis sii kordhaya. Duqa magaalada ayaa laga yaabaa, maxkamad la'aan, inay xiraan guryaha la xiriira ka ganacsiga daroogada ama falal dambiyeed kale. Tani waxay dhacdaa marar badan, xitaa iyadoo qaddar yar oo daroogo ah ama marka wax dhib ahi jirin. Ku la dagaalanka daroogada ayaa sii socota iyo dad rayid ah oo aan waxba galabsan iyo xitaa caruur ayaa ah dhibanayaasha. Dulucda riwaayad cusub ayaa soo ifbaxaysa. Dawlada hoose ayaa sida muuqata waxbadan ka baratay arimaha manfacyada.
Marka, wanaagga dhammaan muwaadiniinta Amsterdam, saddex-xagalka Amsterdam wuxuu soo jeedinayaa in la qaado tallaabooyin dhowr ah oo khatar ku ah fayoobaanta isla muwaadiniinta. Sideed ula timaadaa taas?
Dagaalka ka dhanka ah mukhaadaraadka ee ka dhanka ah daroogada lama guuleysan karo. (afb.)
In kasta oo dalal badan oo nagu hareeraysan ay ogaadeen in "dagaalka ka dhanka ah daroogada" aan lagu guuleysan karin oo aan raadineyno waxyaabo kale, Nederland waxaan weli si buuxda ugu heellan nahay cadaadis, iyada oo nooc aaminaad muqaddas ah ay tahay in markan ay yeelan doonto saameynta la doonayo. horseed. Waallidu waxay sameysaa isla wax isku mid ah waxayna rajeyneysaa natiijo taa ka duwan, eeg Einstein al dagaalka ka hortagga daroogada laguma guuleysan karo. Maamulayaashu sida ugu dhaqsaha badan way aqoonsadaan tan waxayna ku dhiiradaan inay raadiyaan waxyaabo kale, sida nidaaminta ama sharciyeynta suuqyada iyo kheyraadka qaarkood, waxaa ugu wanaagsan wanaagga dhammaan muwaadiniinta Nederland.
dembigo'aan qaadashodaroogadasiyaasadda daroogadaKHLANederlandsharciga
2 faallooyin 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiniiniga CBD wuxuu hagaajiyaa xanuunka neuropathic ee durugsan ee bukaanka sonkorowga qaba
Henrice May 19, 2021 - 08:07
Dhammaan barnaamijyadaas dawladeed ee lagu siinayo dhalinyarada nugul aragtida badanaa saameyn yar kuma leh sidoo kale. Waxaa jira boorso lacag ah oo aad u tiro badan, in yar oo dhalinyaro ah ayaa hela shaqo ku meel gaar ah oo aan qiimo badnayn iyada oo la huwinayo khibrad shaqo oo markay lacagtu dhammaato ay ku noqonayaan hal jibbaar.
Kaliya ضا Oktoobar 30, 2021 - 08:51
هدف براندازی مواد مخدر باید یک طرح جهانی باشد.مثال .برخی دولت ها مثل کره شمالی و افغانستان و و ده ها دولت و توجهی مخدر گره خورده که مثلن در کاری کنید طرح تون محکوم به شکست هستش اعتقاد سازی دارند من همین هلند رو مثال میزنم iyo برخی اشد مجازت دارند مانند عربستان خودمون دها کتاه و بلند مدت Alan یک مثل واتیکان داره با پول خیریه بزرگترين باید به اعتیاد با نگاهی مشترک دیده شود.مثل نگاهی که به کرونا داریم .مثل نگاهی که به طاعون یا سرطان داریم.همه برای نابود کردنش بجنگند که محاله. در خود کمپ های اعتیاد دیدم به به فراد مود میفروشند. اینقدر درآمدهای این صنعت ساخت توزیع جذاب هستش که ترک اون محاله . تنها با ساخت یک کیلو به سودی صد مرسیم . کنید کاری رو با هفته ای صد میلیون درآمد.
Oh oh, California xagaaga waa in...
New York waxay mamnuucday haysashada xashiishadda ...